Nhau - Heano nhanho-nhanho-mirairo ekuti ungashandise sei bvudzi rinodzora, bvudzi rinotwasuka uye bvudzi rinosimudza bvudzi.
NZIRA DZOKUSHANDISA NOKUDZIDZA Bvudzi
Kana iwe uri kushandisa yechinyakare bvudzi curler, hezvino zvekuita.
1. Tora chikamu chebvudzi. Gadzira chikamu chebvudzi kuti curl. Izvo zvidiki chikamu, chakasimba curl. Iyo yakakura chikamu, inosunungura iyo curl.
2. Isa nzvimbo yako yekukomberedza iron. Vhura simbi yesimbi yako, wozoiisa kumudzi wechikamu chako chebvudzi, nebvudzi rakaiswa pakati pechiramba chakavhurika nedare. Chenjera kuti urege kuzvipisa.
3. Vhara uye slide. Vhara zvakapfava iyo clamp, wobva waisa iyo pasi chikamu chebvudzi kusvika chave kumagumo. Vhara kiramba zvizere.
4. Kumonyanisa, kumonyanisa, kumonyanisa. Dzorera simbi yako yakakombamira kumusoro kumidzi yako, uchimonera kureba kwechikamu chakatenderedza mukuita. Mirira maminitsi gumi kusvika gumi neshanu kuti vhudzi rako ripise.
5. Vhura kiramba uye usunungure. Zvinyoro vhura iyo clamp uye dhonza iyo yakakomberedza iron kubva kubvudzi rako, uchibvumira iyo curl yawakangogadzira kuti igare zvakasununguka. Kwete zvakanyanya kuoma, handiti?
Zano remupepeti: Kana iwe uchida kutaridzika kwakawanda, peta bvudzi rako kure nechiso chako. Kuti uite kudaro, tenderedza bvudzi rako pasi uye nekutenderedza yako yekumoneredza wand munzira yakatarisa kurudyi uye kuruboshwe uchienda kuruboshwe kuruboshwe.
NZIRA DZOKUSHANDISA NEDZIMWE BHUKU
Kana iwe uri kushandisa yechinyakare bvudzi straightener, hezvino zvekuita.
1. Shandisa kurudyi flat iron. Ceramic straighteners yakanaka kune yakanaka kune yakasarudzika bvudzi mhando sezvo ivo vachizobatsira kupomhodza bvudzi.
2. Mhanya iyo yakatwasuka kuburikidza nebvudzi rako. Iye zvino zvawakapatsanura bvudzi rako, unogona kutanga kutwasanudza masendimita masendimita maviri nehafu. Tanga pamberi pebvudzi rako uye fambisa nzira yako pamwe nevhudzi rako kusvikira iwe wasvika kune rimwe divi remusoro wako. Kuti utwasanidze bvudzi rako, tora chidimbu che 1 inch (2.5 cm), kamura nacho, wozoibata. Wobva wamhanya nesimbi yakati sandara kuburikidza nebvudzi rako, uchitanga kubva pamidzi yako uye uchienda kumagumo ebvudzi rako. Ita izvi kusvikira wagadzirisa bvudzi rako rese.
Paunenge uchisimudza bvudzi rako, edza kungomhanyisa iyo yakatwasuka kuburikidza netambo yebvudzi kamwe chete. Ichi ndicho chikonzero kukakavara kwakakosha, nekuti ukaswededza iwe kukweva bvudzi rako, inokurumidza kutwasuka.
Kana bvudzi rako richigwinyisa iwe uchirigadzirisa, izvi zvinogona kureva kuti hauna kuinyatsomesa. Tora mudziyo wekuomesa uye woomesa bvudzi rako usati warigadzirisa zvakare.
Kana iwe uchikwanisa, shandisa yakaderera kupisa kumisikidza pane yako flat iron. Iwo marongero epamusoro akanyatso gadzirirwa nyanzvi dzepa salon, uye anogona kukuvadza bvudzi rako kana ukasaridzivirira zvakanaka. Chinangwa chekugara pakati pe300 ne350 degrees.
Dzimwe nguva zvinobatsira kudzinga yako flat iron simbi mushure memuzinga. Tora muzinga utange pamidzi yebvudzi rako. Zvinyoronyoro mhanyisa muzinga pasi pebvudzi rako uye paunenge uchidaro, tevera muzinga neako straightener. Izvi zvinogona kungobatsira kuchengetedza bvudzi rako rakati sandara uye tangle yemahara paunenge uchizvitwasanudza.
3. Wedzera kupenya neserum. Kubata bvudzi rako munzvimbo uye kugadzira kupenya, spritz kana kuisa serum mukati mese bvudzi rako. Izvi zvinobatsira kudzora hutsi uye kubhururuka uchienda pamwe nekupa vhudzi rako imwe silika. Unogona zvakare kupfapfaidza vhudzi rako nekamudzivhudzi kanogadzika pamidzi kuti kasatombozeka zuva rose. 
NZIRA DZOKUSHANDISA Bvudzi Bhurashi
Kana iwe uri kushandisa bvudzi rinotwasanudza bhurasho, hezvino zvekuita.
1. Gura bvudzi rako kumatunhu mana. Pachikamu chimwe nechimwe unofanirwa kuisa chinodzivirira kupisa. Kunyangwe mizinga inopisa isingakanganisi bvudzi zvakanyanya sekutwasuka, zvakanakisa kuve nechokwadi chekuti vhudzi rakachengetedzwa zvakanaka kubva kukuvara kwekupisa kunogona kukonzeresa kuti riome uye ripwanye. Sunga matatu ematunhu kure neyauri kushanda nawo, uye wozopatsanura nzvimbo iyoyo nehafu. Kuti itwasanuke zvakakwana, bvudzi rinofanira kusunganidzwa nepakati nekamu yakakura. Uyai nehafu miviri yedunhu rekutanga pamwechete kana ese ari maviri akasungirirwa musanganiswa une mazamu akakura.
2. Mhanya muzinga unopisa padhuze nemidzi yako sezvaungagone usingazvitsva. Ita shuwa yekungoita hafu yedunhu. Enda pamusoro payo kusvika iwe wasvika pakatwasuka iwe chaunoda, kunyangwe mbiri-katatu inoshanda zvakanyanya kune yakatwasuka asi kwete bvudzi rakatsetseka.
3. Dzokorora matanho ese nechikamu chimwe nechimwe.
4. Ita zvimwe mushure mekuchengetwa. Kuti uwane mhedzisiro, inogara kwenguva refu, isa mafuta, bota, kana kusiya-kune bvudzi richangobva kusanganiswa. Olive mafuta, castor oiri, kana shea bata inokurudzirwa. Bvudzi racho rinogona kunge rakaoma nekuda kwekupisa, saka yeuka kunyorovesa zvakapetwa kaviri pazuva.